Ubuhle obuvuthiweyo buya kudlala ngemibala emitsha, ukuba ukhetha ityala elifanelekileyo. Unokukhetha njani ikhabethe lebusika eligqibeleleyo labasetyhini ngama-50? Kwiimpahla zangaphandle, ukubheja kwizinto zendalo kunye nomgangatho ophezulu. Kwiminyaka engama-50, umfazi unako ukugqoka iingubo zoboya ezenziwe ngobushushu bemvelo, iingubo ezihlambulukileyo zempahla yeegusha, iingubo ezintle zeboya kwaye ngexesha elifanayo ukuba angayityholwa yinto engalunganga, ukungcola okanye umnqweno wokubonisa ubutyebi bakhe.
Kwinqabileyo yasebusika yowesifazane oneminyaka engaphezulu kwama-50 kufuneka ibe yinto yokunethezeka
Izambatho kunye neebhatyi ngendlela yaseChanel - iqabane elungileyo kwiingubo ezintle okanye iingubo zeegusha. Baza kugxininisa yonke imobudala yobudala baze babonise ukuba nabasetyhini abangaphezu kwama-50 banokulandela imodeli kwaye ngexesha elifanayo bajonge isicatshulwa baze bahlale ngabanye.
Ukuphakanyiswa kweChanel kubafazi abangaphezu kwama-50
Iimpuphu kunye nezigulane zizinto ezineminyaka engama-20 ubudala kunye nabesifazane abangama-50 abaneminyaka engama-50 abakwazi ukuyenza ngaphandle kwasebusika. Into ephambili kukuba ukhethe umzekelo ofanelekileyo kwaye udibanise ngobuchule kunye neebhulukhwe kunye neengubo.
I-Sweater - into ebalulekileyo ebhabhinini labasebusika elingama-50
IinguMidi zokugqoka ezenziwe ngeemfusa zeboya ziyindlela ekhethekileyo yokuvula imvula yebusika. Ngokongeza isambatho esinjalo kunye nezixhobo ezifanelekileyo, umfazi oneminyaka engaphezulu kwama-50 unokukwazi ukuphazamiseka lula kwiintlobo ezininzi-amantombazana kunye neenkwenkwezi ezincinane zendlela yesitalato. Yaye ungesabi imibala eqaqambileyo kunye nokwamkela "ibloko lebala". Ezi zixhobo zemibala zinezixhobo ezivuselelayo ezimangalisayo. Khangela nje uHelen Mirren kunye neMile Streep!
Ugqoke nge "impembelelo yokuvuselela" - inkohliso enobuqili kunye nabangaphezu kwe-50
Yaye yintoni isigqila sasebusika ngaphandle kweengubo ezilungileyo zokuNyaka omtsha? Amakhosikazi angama-50 aya kujongela iingubo zobubele kumgangatho, iimodeli ezimnandi ze-midi, ukudibanisa kwe-silk ephezulu kunye neengubo ezikwindlela yokujonga entsha okanye i-trouser-palazzo.
Ukutshintsha kweengubo zonyaka omtsha kubhinqa kuma-50
Izambatho zesitayela saseMaritime
Indlela yokugqoka i-stylishly full of women
Eyona mincili kakhulu ngefashoni
Ukubhiyozelwa kweGlamor: Ukubambisana kweJerry Couture kunye ne-Swarovski
Ubuhle buzele ngabasetyhini
Khetha isitofu segesi
Fritata nge sardines
Ibhotela ye-cocoa ihamba
I-Focaccia ngeidiliya kunye ne-rosemary
Sibuyisela umyalelo ekhitshini ngoncedo lweendlela ezicwangcisiweyo
Zrazy kusuka kwitshalo seqanda
3 ezintsha iindlela zokupheka zetafile zonyaka weNtsha ka-2018: Zihle kakhulu!
Ukuhlanjululwa ngamakhadi aqhelekileyo kubaqalayo
10 "akunakwenzeka" kwimeko yokugula
Ukuzala ngaphandle kwentlungu kunye noyiko
Family Iglesias Russiafied
Ukuxilwa kweVidiyo yentamo kunye nommandla weekholeji